Talooyin ku wajahan Muslimiinta - Wikipedia
Talooyin ku wajahan Muslimiinta
Al-Callaama Sheekh Maxamed Naasirud-diin al-Albaani –Eebbe ha u naxariistee- wuxuu leeyahay talooyin wanaagsan oo ay tahay in lagu dhaqmo marka la tabardaran yahay dadkuna ay ka fog yihiin Diinta dhabta ah. Waxaana halkan ku soo guurinayaa su’aal la weydiiyay Sheekh Albaani, aniga oo soo koobaya jawaabtiisa.
Qof baa wuxuu waydiiyay isagoo oranaya: Waxaan ognahay – Sheekheenow maalmahan – meeqaa la dagaalamayso Islaamka oo ku sugan dacalada adduunka, mana aragno Dawladdaha oo far dhaqaajinayaan; maxaynu ka samaynaa –annagu- arinkan? ma ku dembaabaynaa haddaanu iska fadhiisano annagoo aynan far dhaqaajinayn?!
Wuxuuna ku jawaabay hadalkiisa: Waxaa mahadda iska leh Eebbe, Isaga ayaan ku mahadinaynaa oo kaalmo weydiisanaynaa oo dembidhaaf weydiisanaynaa … intaas ka dib:
Su’aashu sida ka muuqato kalama jeedo - markuu lahaa: waan iska fadhiisanaynaa waxaanu samaynaynana ma laha! ee wuxuu kala jeeday: waxyaabo gaar ah ayaanu samaynaynaa ee ma aha wax walba sideedaba ma samaynayno … -Dhamaantana waxaan ognahay- hadduu Eebbe yiraahdo in hadalka Eebbe Kor ahaaye: (ان تنصروا الله ) Haddaad Eebbe u gargaartaan uu yahay Shardi, jawaabtiisuna tahay: ( …ينصركم ) Wuu idiin gargaarayaa. Haddaba waxaa la isweydiinayaa. Muslimiintu shardigaas ma sameeyeen, oo ma sameeyeen ugu horeyn waajibkan kaas oo ah shardiga inuu dhaboobo inuu Eebbe u gargaaro Muslimiinta marka xiga?!
Ku kasta oo idinka mid ah jawaabtiisu waxay tahay: Muslimiinta ma aysan samaynin inay u gargaaraan Eebbe Kor ahaaye oo laga wado inay raacaan Axkaamta Shareecadiisa… Muslimiinta maanta joogta guud ahaan way ka jeesteen inay bartaan Diintooda, iyo barashada Axkaamtiisa! Intooda badan oo iyaga ka mid ah hadday Islaamka wax ka yaqaanaan: waxay yaqaanaan Islaam aan dhab ahayn, waxay yaqaanaan Islaam ka duwan kii uu haystay Rasuulka Eebbe amaan iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee iyo Asxaabtiisa, sidaas darteed gargaarka Eebbe ee uu u balanqaaday qofkii u gargaara inuu u gargaarayo wuxuu ku xiran yahay in loo yaqaano Islaamka ugu horeyn garasho sax ah sida ku soo aroortay Qur’aanka iyo Sunnada iyo fahamkii Salafka Umadda ka dibna lagu dhaqmo marka xiga...
Waxaan doonayaa inaan xasuusiyo dadka sidaan mar dhow iri waxay caadaysteen Muslimiinta maanta badankooda... wixii eed oo dhan inay u tiiriyaan Madaxda... Dhab ahaantiina eeddan waxaa loo tiirinayaa Umadda oo dhan hadday ahaan lahaayeen madax iyo shacabba oo ma aha kan oo kaliya ee waxaa jira koox ka mid ah kuwaas eedeynaya madaxda Muslimiinta... waxay khilaafeen Axkaamta Islaamka markay u mareen waddadii lagu beddeli lahaa xaaladdan jid ka duwan jidkii Rasuulka amaan iyo nabadgelyada Eebbe korkiisa ha ahaatee iyagoo gaalaysiinaya madaxda Muslimiinta, marka koowaad, ka dibna oranaya waa waajib in lagu baxaa marka labaad... dabadeedna mushkiladda intaas kuma ekaatee, ee arinku intaasi waa uu ka sii daraa ilaa ay iskhilaafaan Muslimiintaas nafsaddooda, oo ay dhacdo in khilaafkaas madaxda banaanka ka noqdaan...
Waxaan shaki ku jirin inuu yahay mowqifka cadowga Islaamka asal ahaan Yuhuudda iyo Nasaarada iyo Gaalada kalaba ee ku sugan dhulalka Gaalada ayaa ka dhib badan shaki la’aan qaar ka mid ah madaxdaasi aanan dheg jalaq u siinayn rabitaanka Muslimiinta inay isku dhaqaan dhexdooda wuxuu Eebbe soo dejiyay... Inkastoo ay u arkaan xal inay la dagaalamaan madaxda Muslimiinta lagama goosanayo mirihii la rabay in la helo, maxaa yeelay sidaan mar dhow soo sheegay dhibka kama taagno madaxda oo kaliya ee sidoo kale waxaa la qaba shacabka... Ee halkee wax ka bilownaa? Ma waxaa laga bilaabayaa in lala dagaalamo madaxda kuwaas oo ku dhaqaya Muslimiinta ( بغير ما انزل الله ) Waxaan Eebbe soo dejin? Mise bilowga wuxuu noqonayaa in lala dagaalamo gaalada dhamaantood waddankii ay joogaanba? Mise waxaa laga bilaabayaa in lala dagaalo nafta dadka farta xumaanta? Jawaabta: waxay tahay in lala dagaalo nafta, halkan ayay tahay in laga bilaabo, maxaa yeelay Nebigu amaan iyo nabadgelyada Eebbe korkiisa ha ahaatee wuxuu ka bilaabay hagaajinta nafta qaar ka mid ah Muslimiinta ee uu ugu yeeray markii ugu horeysay Dacwada Islaamka... Maxaa yeelay Madaxdaas hadday ahaan lahaayeen Gaalo sida Yuhuudda iyo Nasaarada -siday ku andacoodaan Ururada Muslimiinta- Ma awoodaan Muslimiinta maanta joogta inay la dagaalamaan Yuhuudda iyo Nasaarada?! Jawaabta waxay tahay: Maya... Sidaas darteed arinku siduu u dhan yahay waa sidii Muslimiintii ugu horeysay ee xiligii Makka... Sabab? Maxaa yeelay waxay ahaayeen kuwo tabardaran, tab iyo awoodna lahayn waxaan ka ahayn Iimaankooda galay qalbiyadooda markii ay raaceen darteed dacwada Nebigooda amaan iyo nabadgelyada Eebbe korkiisa ha ahaatee raacitaankaas iyo dulqaadashadoodii wix dhib ah ee la soo gudboonaado waa kii dhaliyay mirihii la rabay in la helo ee aan annagu maanta raadinayno. Jidka lagu gaaraayo mirahaasi waa isla jidkii ay mareen Rasuulka amaan iyo nabadgelyada Eebbe korkiisa ha ahaatee iyo Asxaabtiisii sharafta badnayd. Sidaas darteed maanta Muslimiinta ma awoodaan inay la dagaalamaan Gaalada maxay tahay inay sameeyaan? Waa inay u rumeeyaan Eebbahooda iyo Rasuulkiisa si dhab ah, hase ahaatee Muslimiinta maanta waa sidii uu Barbaariyaha uumanka yiri: (ولكن اكثر الناس لا يعلمون ) Hase ahaatee dadka badankooda wax ma garanayaan. Muslimiinta maanta waxay muslimiin ka yihiin magaca, ma aha Muslimiin dhab ah... Hase ahaatee waxaan xasuusinayaa hadalkii Kor ahaaye:
قَدْ أَفْلَحَ ٱلْمُؤْمِنُونَ * ٱلَّذِينَ هُمْ فِي صَلاَتِهِمْ خَاشِعُونَ * وَٱلَّذِينَ هُمْ عَنِ ٱللَّغْوِ مُّعْرِضُونَ * وَٱلَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَـاةِ فَاعِلُونَ * وَٱلَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ * إِلاَّ عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ * فَمَنِ ٱبْتَغَىٰ وَرَآءَ ذٰلِكَ فَأُوْلَـٰئِكَ هُمُ ٱلْعَادُونَ *
Yay ka muuqdaan astaamahaasi lagu sheegay Aayadaha kore?.
Waxaa kaloo jira Aayaad kale... : (أولئك هم المؤمنون حقا ) Kuwaas ayaa Mu’miniinta dhabta ah. Annagase Mu’miniin dhab ah ma nahay?!
Jawaabta waa: Maya; Sidaas darteed Muslimiinta maanta ma aha Mu’miniin dhab ah; maxaa yeelay Iimaanka dhabta ah wuxuu u baahan yahay dhaqangelin dhab ah.
Sida Aayadda kor ku soo marnay:
Annaga ma u tukannaa salaaddeena annagoo khushuucsan? Jawaabta waa: Haddii laga eego koox ahaan iyo haddii laga eego Umad ahaan; Sidaas ma aha, waxaa loo baahan yahay inaan samayno sida ay na farayso Shareecada Islaamka ilaa uu Rabbigeena dhibka naga kor qaadayo, dhibkaas oo dhamaantanada na wada haysto... Waxaa ka mid ah Axaadiista Nebiga amaan iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaadee: (...إذا تبايعتم بالعينة ) Haddaad wax ku kala gadataan Ribada ”Dulsaarka”. Ma jiraa qof idinka mid ah oon la socon inay Muslimiinta isticmaalaan Ribada...?
Waxaan leeyahay mar kale: Ribadaasi ma isticmaalaan qaar ka mid ah madaxda oo kaliya hase ahaatee waxaa kaloo isticmaala qaar ka mid ah shacabka; Maxaa yeelay kuwaasi shacabka ah waa kuwa la shaqaysta Bangiyada Ribada isticmaala waa kuwa marka lagala doodo oo lagu yiraahdo: Ribada lama oggola waana siduu Nebigu amaan iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee yiri:
"درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد عند الله من ستة وثلاثين زنية".
Dirham Riba ah qofkii cuna isagoo og wuxuu Eebbe agtiisa ka daran yahay soddon iyo lix sinaystay: (Mana aqbalaayaan) (Haddii la weydiiyo mid iyaga ka mid ah): Maxaad u isticmaalaysaa Ribada? Wuxuu ku oranayaa? maxay tahay inaan sameeyo? waxaan doonayaa inaan noolaado! Sidaas darteed; arinku shaqo kuma laha madaxda oo (kaliya) ee dhibka wuxuu ka socdaa shacabka intaan la gaarin madaxda. Run ahaantii fasaadka shacabka wuxuu la mid yahay midka madaxdaasi... Madaxdaasi noogama soo degin xiddiga Marriikh ama Maaris?! ee ”annagay naga mid yihiin naguna dhex jiraan”, ee haddii aynu doonayno inaan hagaajino xaaladdeenna: Ma aha inaan la dagaalno madaxdeena oo aan hilmaano nafsaddeena...
Dhibaatooyinka maanta jira oo dhan oo ay la laablakacsan yihiin qaar ka mid ah dhalinyarada, oo ay leeyihiin maxaa la sameeyaa? Ma lagu xalin karo laablakac, ee waa in lagu xaliyaa aqoon iyo waxqabad: ( وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ ) Waxaa tiraahdaa ku dhaqma Eebbana wuxuu arki doonaa dhaqamadiina. Qaar ka mid ah iyaga waxay u arkaan inuu yahay dhibka Yahuudda qabsashadeeda Falastiin, dhibkana waa kii aan mar dhow ka soo hadalnay: Annagana waxaan leenahay: Dhibka ugu wayn ee maanta jiraa waa kala qaybsanaanta Muslimiinta ay ku kala qaybsan yihiin ... kooxo iyo ururo...
Waqtigan xaadirka ah kooxooyinka Muslimiinta ee hadda jira waxay isku khilaafsan yihiin jidkii lagu xalin lahaa dhibka jira.
Waxaa jira waddooyin:
Waddada koowaad ee aan lahayn mid labaad waa in loo fahmaa Islaamka faham sax ah lana dhaqangeliyaa, laguna barbaariyo Muslimiinta Islaamkan sifaysan, sidan ayayna ahayd Sunnada Rasuulka amaan iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee sidaan soo sheegnay mar walbana waan sheegaynaa: Markuu Rasuulka Eebbe uu bilaabay Dacwada inuu gaarsiiyo Asxaabta wuxuu ugu yeeray inay rumeeyaan Eebbe iyo Rasuulkiisa ka dibna wuxuu baray Axkaamta Islaamka wuxuuna faray inay ku dhaqmaan markii ay ka cabanayeen wixii ka soo gaaray Gaalada ee xadgudub ahaa iyo sida xun ee Gaalada ula dhaqmi jirtay wuxuu fari jiray inay dulqaataan.
Waxaa jira dhaqdhaqaaqyo ama xarakooyin, iyo dacwadooyin kale oo dhamaantood ka hor imaanaya waddadii aan soo sheegnay oo aan lahayn mid labaad; Waxay leeyihiin: Islaamka barashadiisa dhinac iska dhiga, halkii laga baran lahaa ama lagu dhaqmi lahaa, hadda arinka ugu muhiimsan waa inaan u midownaa la dagaalanka Gaalada Eebaha Hufnaayow sidee loola dagaalami karaa hub la’aan?. ... Jawaabta aan la isku khilaafsanayn waxay tahay: Is hubeey dabadeed dagaalan, waa marka laga hadlayo dhinaca maaddiga. Ma haddaan ka hadlayno dhinaca Diinta: ... Haddii aan doonayno inaan la dagaalano Gaalada Islaamka dhinac iskama dhigi karno; Maxaa yeelay Eebbe sidaas nama farin...
Annaga ma awoodno maanta oo ma haysanno wax hub maaddi ah oo lagu dagaalgali karo...
Waxaan leenahay ma doonaynaa inaan ku dagaal galno hubka maaddiga ah; Kaasi nooma suurtoobayso.Hase yeeshee waxaa gacmaha noogu jiro hubka Diinteenna ah:
" فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك "
Waxaad ogaataa inuusan jirin Eebbe aan ka ahayn Eebbaha waydiisana inuu kuu dembidhaafo. Aqoon u yeelo Diintaada ka dibna ku dhaqan – intaan awoodno – Markaan Diinteenna barano kuna dhaqano ka dib ayaa na looga baahan yahay inaan u diyaarsano hubka maaddiga ah sida uu Eebbe Kor ahaaye na leeyahay:
(واعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم)
U diyaarsada intii aad kartaan oo awood ah cadowga Eebbe iyo cadowgiina.
Maxaan ka bilownaa?! waxaan ka bilaabaynaa ugu horeyn siday u kala muhiimsan yihiin; gaar ahaan hadduu fudud yahay kan ugu muhiimsan waana hubka Diinta: oo ah in Islaamka loo fahmo faham sax ah, loona dhaqangeliyo dhaqangelin sax ah ka dibna hubka maaddiga ah hadduu fudud yahay.
Maantase nasiib xumo wixii ka dhacay Afganistaan hubkii maaddiga ahaa ee ay Muslimiinta kula dagaalameen Hantiwadaagga ma wuxuu ahaa hub Islaami ah.
Jawaabtu waa: Maya wuxuu ahaa hub reer Galbeed leeyahay, sidaas darteed annaga maanta dhinaca hubka maaddiga waxaan kala joognaa kaaf iyo kala dheeri haddaanu maanta dooni lahayn inaan dagaalano oo aan ku fiicannahay dhinaca awoodda Diinta.
Haddaanu dooni lahayn inaan ku dagaal galno hubka maaddiga ah waa inaan hubkaas dibadda ka keensannaa annaga oo soo gadanayno ama nala siinayo, ama aan ku dhaafsiisanayno wax kale ...
Sidaas darteed walaalaheenow ma aha sidaan u malaynayno xalku: Laablakac iyo fudayd dhalinyaronimo iyo kacaannimo ka dibna aan lahayn wax muuqdo oo natiijo ah...
Raacitaan la’aanta jidka Mu’miniinta ayaa keentay musiibooyinka tii u waynayd oo ah inay Yuhuudda qabsato Falastiin.
Musiibada dadka Muslimiinta maanta haysatana waa inay ka baadiyoobeen jidkii toosnaa...
Haddii ay Muslimiinta – waqtiyada qaarkood – ahaayeen kuwo tabardaran oo ay Gaaladu dhibto oo lalaayo ka dibna ay dhintaan waxaan shaki ku jirin inay dhinteen iyagoo kuwo kheyr qaba ah, haba ku ahaadaane Adduunka kuwa tabardaran. Kiise iyaga ka mid ah oo Adduunka ugu noolaado isagoo ka fog fahamka Islaamka siduu Eebbe Kor ahaaye iyo Rasuulkiisa doonayay kaasina wuxuu dhimanayaa isagoo sharqabe ah; Haba la moodee inuu haysto nolol raaxo leh, sidaas darteed – Eebbe ha idin barakeeyee – Xalku wuxuu ku jiraa:( ففروا إلي الله ) U carara Eebbe xaggiisa. Fahma wuxuu Eebbe yiri iyo Rasuulkiisa, iyo waxay yiraahdeen Saxaabada, kuna dhaqma wuxuu Eebbe yiri iyo wuxuu Rasuulkiisa amaan iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee yiri iyo waxay ku dhaqmeen Saxaabada...
Intaas ayaan ku soo gabagabaynayaa jawaabta su’aashaas.
Waxaana laga soo guuriyay wargeyska la yiraahdo ”المجلة السلفية al-Majala as-Salafiya tirsiga 9aad, 1425 H”.
Waxaana turjumay CabdiRisaaq Maxamed Cilmi ”ina Warfaa” http://www.freewebs.com/ina-warfaa
Islām—The Way to God by Submission (en)[wax ka badal | wax ka badal xogta]
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Talooyin_ku_wajahan_Muslimiinta&oldid=219075"
Boggaan waxaa markii ugu danbeesay wax laga badalay 10 Oktoobar 2021, marka ee eheed 20:01.